အသံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲပေးမယ့် iOS Apk နှစ်ခု! – AsiaApps
အသံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲပေးမယ့် iOS Apk နှစ်ခု!
January 17, 2018 January 17, 2018 MoonFeatures / ReviewsNo Comment on အသံအမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲပေးမယ့် iOS Apk နှစ်ခု!
Voice Changer Plus (iOS – Free)
သင့်ရဲ့ မူလ အသံကို ရယ်စရာကောင်းပြီး အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ အသံတွေ ပြောင်းပေးမယ့် apk ဖြစ်ပါတယ်။ Apkထဲမှာ များပြားတဲ့အသံနေ အသံထားတွေနဲ့ Sound effects တွေကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုရင် အရင်ဆုံး Record ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး တစ်ခုခုကိုပြောရပါမယ်။ ပြောပြီးရင် မတူညီတဲ့အသံနေအသံနေအသံထား တွေကို ရွေးချယ် ပြောင်းလို့ရပါပြီ။ အသံအမျိူးအစားပေါင်း ၅၅ ခုပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အသံကိုပြောင်းပြီး save လို့ရသလို share လို့လဲရပါတယ်။ App Store မှာ rating 4.4 ရရှီထားပြီး ဖိုင်size အရွယ်အစား 79.3MB ရှိပါတယ်။
Image Source – Voice Changer Plus
Voice Change.r – Funny Vid.eo Sound Effect Edit.or(iOS – free)
Video ထဲက အသံကို ပြောင်းပေးမှာပါ။ သင့်ဖုန်းထဲက video တစ်ခုကိုရွေးပြီး ယောကျာ်းသံ၊ မိန်းမသံ၊ ကလေးအသံ၊ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးအသံ စတဲ့ အသံတွေ ရွေးချယ် ပြောင်းလဲ လို့ရပါတယ်။
မပြောင်းခင် အသံတွေကိုကြိုတင်နားထောင်နိုင်ပြီး ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အသံ ထည့်ပြီးရင် ဖုန်း album ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလို့ရသလို သူငယ်ချင်းတွေဆီလည်း ဝေမျှလို့လဒရပါတယ်။ App Store မှာ Rating 4.8 အထိရရှိထားပါတယ်။ ဖိုင် အရွယ်အစားကတော့ 6.8 MB ရှိပါတယ်။
Image Source – Voice Change.r – Funny Vid.eo Sound Effect Edit.or
iOS တွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ Black & White ဓာတ်ပုံ နဲ့ color ချိန်ညှိနိုင်တဲ့ Color Splash